Home » Toerana fitsangatsanganana » Puerto Rico hanohy ny fizahan-tany any amin'ny volana ambony
Ao anatin'ny drafitra fanokafana efatra dingana tompon'andraikitra amin'ny Nosy, nanambara i Puerto Rico fa hanao ara-dalàna izany misokatra indray ho an'ny fizahan-tany any amin'ny 15 Jolay. Na izany aza, nisokatra indray ny morontsiraka tamin'ny alàlan'ny filentehan'ny masoandro sy ireo fialamboly hafa izay namela ny famerana ny fivorian'ny vondrona ho an'ireo izay ao anatin'ny trano iray ihany.
Ny zavatra iray tokony hamafisina, araka ny fantatrao, dia ny hoe efa nitandrina tsara i Puerto Rico hatramin'ny nanombohan'ny Covid-19, miaraka amin'ny politika napetraka mba hisorohana ny fihanaky ny viriosy manerana ny Nosy, ao anatin'izany ny maha-fikambanana amerikanina voalohany izay nametraka fepetra henjana toy ny curfew manerana ny Nosy. Ny fepetra fidiovana tanteraka dia napetraka manerana ny Nosy, ary misy ny fanatsarana ny politika izay manaraka ny torolàlana momba ny fahasalamana sy ny fiarovana an'ny Fikambanan'i Etazonia (USTA) miaraka amin'ireo fepetra ampiharina eo an-toerana, novolavolain'ny Orinasa fizahantany Puerto Rico.
Ireto ambany ireto ny sasantsasany amin'ireo tidbits haingana tokony ho fantatry ny mpandeha rehefa mikasa ny hitsidika azy ireo any Puerto Rico izy ireo:
Ny curfew dia mandaitra hatramin'ny 30 jona fa efa nitatra hatramin'ny 10:00 PM - 5:00 AM; ny maningana dia natao ho an'ny maika.
Nisokatra indray ny morontsiraka tamin'ny alàlan'ny filentehan'ny masoandro sy ireo hetsika fialamboly hafa izay namela ny famerana ny fivorian'ny vondrona ho an'ireo izay ao anatin'ny trano iray ihany.
Misokatra ary mampitombo ny fahafaha-manao 50% manomboka ny 16 Jona ny dobo fandraisam-bahiny.
Misokatra sy mampitombo ny fahafaha-manao 50% ny trano fisakafoanana manomboka ny 16 Jona.
Misokatra ny toeram-pivarotana sy ny fivarotana antsinjarany hafa, saingy tsy misy filaharana mandehandeha amin'izao fotoana izao. Ilaina ny fanendrena.
Ireo trano filokana sy kianja filalaovana dia hikatona mandra-pahatongan'ny fampandrenesana fanampiny.
NewTree Ranch dia manomboka ny famandrihana famandrihana manome toeram-pitrandrahana maharitra azo itokisana izay misy ny fitsangatsanganana sy ny fahasalamana